Zavakanto & Kolontsaina · Jona, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Zavakanto & Kolontsaina · Jona, 2017
Tantara mikasika ny Zavakanto & Kolontsaina tamin'ny Jona, 2017
Heverina toy ny fihodinana ao amin'ny kolontsaina Japoney taorian'ny ady ny fitsidihan'ny Beatles tany Japàna tamin'ny 1966.
Ny Zavamaneno Avy Amin'ny Lafivalon'Izao Tontolo Izao
Lahatsary ahitana zavamaneno mahaliana avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao, anisan'izany ny zavamaneno vita amin'ny boaty namboarina sy tavoahangy soda plastika , ny fanehoana ny fomba hanamboarana ny didgeridoos , ary ny hira nentim-paharazana Rosiana lalaovina amin'ny vielle à roue.
Ny Arabo Saodiana Sy Ny Fiarany
Ny fiara nanaovana fanamboarana mba hanana endrika tena miavaka amin'ny hafa, ny fifaninanan'ny fiara mandeha mafy mampidi-doza sy ny fampisehoana mampivarahontsana eny amin'ny lalambe avy any Arabia Saodita
Rosia: Tsikeran'ny Mpanao Bilaogy Iray Mahakasika ny “L’Associé”
Amerika Avaratra 30 Jona 2017
Ovan'ireo mpanoratra ny andiany farany amin'ireo tantarana mpitsongodia. Ny tanjona - hisarihana ny sain'ny mpamaky mandritra ireo ora maro any anaty fiara fitaterana iombonana na eny amin'ny morontsiraka - nahomby tamin'ireo tranga roa ireo.
Azia Atsimo 29 Jona 2017
Ny Video Volunteers na Mpaka Sary Mpilatsaka An-tsitrapo dia fikambanan'ny mpamokatra fampitam-baovao tsy mitady tombontsoa avy amin'ireo tanànakely sy trano bongo ao India, izay mamorona votoaty manan-danja ho azy ireo sy mandefa izany hojeren'ny vondrom-piarahamonina.
11-11-11: Raiso Ny Fakantsarinao Ary Alaivo Sary Ny Fiainana
Amerika Avaratra 29 Jona 2017
Andro vitsivitsy sisa dia tonga ny 11/11/11, andro iray hiraketan'ny olona maneran-tany ny fiainany anaty horonantsary sy hira. Mandraisa anjara amin’ny tetikasa 11Eleven sy ny Andro Iray Eto An-tany mba hamelana ny marikao eto an-tany.